Archive du 20171221
Taona 2017 Hazo fijaliana ho an’ny Malagasy
Hivalona afaka roa herinandro ny taona 2017 izay azo fintinina ho lalan’ny hazo fijaliana ho an’ny Malagasy. Azo ambara ho andro niditra na koa ho “taona niditra” ity taona ity.
Voninahitsy Jean Eugène Vao nipoitra dia nanondrana
Elaela no tsy nandrenesana intsony ny feon’ny filohan’ny antoko politika RPSD Vaovao, Voninahitsy Jean Eugène. Niverina naneho ny heviny indray izy omaly ary avy hatrany dia ny mikasika ny tsy tokony hilatsahan’ny filoham-pirenena teo aloha,
Tsy mitamby amin’ny iraisam-pirenena Manantena ny volaben’ny Arabo ny HVM ?
Matahotra fifidianana fadiranovana ny HVM. Resabe fotsiny hatreto ny fakan-kevitra momba ny lalàm-pifidianana fa tombanana izay mahadiavolana ny sain’izy ireo ihany no hivoaka eo.
Fitoniana sy filaminana no tadiavin’ny firenena amin’izao vanim-potoana akaiky fifidianana izao, ary ny fanjakana ankehitriny no tokony hikatsaka izany voalohany indrindra.
Andriamampianina Mitavozavoza loatra ny mpitondra
Mampiteny ny moana ny fahantram-bahoaka eto Madagasikara na dia ambaran’ny mpitondra sy ny mpamatsy vola aza fa nidina ny tahan’ny fahantrana, izay mifanohitra tanteraka amin’ny zava-misy.
Taratasin’i Jean Jereo ny fitaratra
Aaah zokibe marina ! Taiza foana ? Elaela ianao aann ! Izao rangahy tena nalahelo anao mafy mihitsy le !
Kaominina Antananarivo Renivohitra Hanatsara ny fampidiran-ketra
Hanampy ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) amin’ny fanisana ara-ketra momba ny trano sy tany eto Antananarivo Renivohitra ny fandaharanasa alemana PRODECID- GIZ na ny Projet de Développement Communal Inclusif et de Décentralisation.
Miaramila 9 maty tany Ikongo Niaretan-tory niaraka tao Fianarantsoa halina
Nigadona tao Fianarantsoa omaly alarobia 20 desambra maraina tao amin’ny Toby Faritany Miaramila Faharoa - Besorohitra ny nofomangatsiakan'ireo mpitandro filaminana sivy lahy lavo am-perinasa rehefa nopaohin’ny rano teo am-piampitana “radier”
CUA - Ocean Trade Matotra ny fiaraha-miasa
Tonga nanolotra vary 50 gony niampy kilalao isan-karazany ho an’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ny orinasa Océan Trade amin’izao
Ambatondrazaka Mbola betsaka ireo feno taona tsy manana kopia
Ministeran’ny mponina Hanadio eny ambany tanàna
Hanao asa tanamaro eny amin’ny faritra iva eto an-drenivohitra mandritra ny roa andro ny ministeran’ny mponina tarihin’ny minisitra Onitiana Realy. Hanomboka anio alakamisy 21 desambra izy io ary hifarana ny zoma 22 desambra.
FAKA Nahatsiaro ireo ankizy tetsy 67 ha
Mahatsiaro an’ireo ankizy beazina ao amin’ny FAKA na Fikambanan’ny sekoly sy Akanin-jaza naorin-dRamatoa Céline Ratsiraka notarihan’ny Sekretera Jeneraliny,
Fizarana kilalao Nandiso fanantenana ny ankizin’Ivato
Vory maro ny ankizin’Ivato efa ho 10 000 satria hoe ho avy ny vadin'ny filoham-pirenena Rtoa Voahangy Rajaonarimampianina hampifaly ny kilonga amin'ny alalan'ny Okalou.
Aiza ihany ny solitany ?
Efa 42 taona izao no nandrenesana an’izany Bemolanga sy Tsimiroro izany fa toa malaza tsy hihinanana toa lovian-tsahona fotsiny.
Fitaterana an-tanàn-dehibe Nipoapoaka ny fampanantenan’ny UCTU
Nampahafantarina tetsy amin’ny foiben’ny fikambanan’ireo kaoperativam-pitaterana an-tanàn-dehibe na UCTU tetsy Ambodivona omaly ny mpikambana vaovao mandrafitra ny birao mpitantana ity fikambanana ity.
Oniversiten’Antananarivo Miato ny fampianarana
Nanapa-kevitra ny hampiato tanteraka ny fampianarana eny amin’ny oniversiten’Antananarivo ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra manodidina ny 900 isa mikambana eo anivon’ny sendikan’izy ireo na ny SECES omaly teny Ankatso.
Ankorondrano Karana UCODIS nisy naka an-keriny
Nitrangana fakana an-keriny teny Ankorondrano, hiditra ny cité Firaisana omaly.
Mpanao trafikam-basy Iray volana tany am-ponja dia afaka
Nikoropaka ny mponina tao Tsararivotra – Sambava omaly raha nahita olona voarohirohy ho mpanamboatra sy mpivarotra basy nefa miriaria eny amin’ny fiarahamonina sahady.
FRANTSA Voakihana mafy ny praiminisitra Edouard Philippe
Avy namita iraka tany Nouvelle-Calédonie ny delegasiona notarihin’ny praiminisitra Edouard Philippe.